नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्धारित मितिमा नै पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने बताएका छन् । बुधबार वाग्मती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा उनले स्थान भने भोलि तय हुने बताए ।
“महाधिवेशन हुन्छ । हुन्छ । तोकिएको समयमै हुन्छ । महाधिवेशन सर्दैन । कहाँ हुन्छ भन्ने भोलि तय हुन्छ,” उनले भने ।
विधान महाधिवेशनमा बुटवलमा गर्ने प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै उनले तर कहाँ हुने भन्ने निश्चित भइनसकेको बताए ।
भोलि एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै छ । आउँदो मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गरिँदै छ ।
अधिवेशन एकैपटक गराउने निर्देशनप्रति अष्टलक्ष्मीको असन्तुष्टि
नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीको वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन यही कार्तिक ६ गते देशभर एकैपटक गर्ने पार्टीको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी उपाध्यक्ष शाक्यले पार्टीको वडा अधिवेशन हतारमा गरिहालौं भन्ने पक्षमा आफू नरहेको अडानसमेत राखेकी छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रथम बैठकमा उनले वडा अधिवेशन हतारमा गरिहालौं र जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताइन्।
‘अब ६ गतेदेखि वडा तहमा एकैचोटी अधिवेशन, पालिकाहरुको अधिवेशन भन्ने कुराहरु निर्देशनमा आइसकेको छ। सम्पूर्ण कमरेडहरु त्यसका लागि तयार हुनै पर्दछ। त्यतिमात्र होइन वडा कमिटीको अधिवेशन, पालिकाको अधिवेशन भनेको केन्द्रीय कमिटीको महाधिवेशनभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने मैले ठानेको छु। किनभन्दा खेरी यो हाम्रो आधार हो, हाम्रो धरातल हो। वडा अधिवेशन भनेको हाम्रो टेक्ने धरातल हो। हाम्रो पाइला कस्तो ठाउँमा राख्ने ? कहाँ राख्दाखेरी बलियो हुन्छ ? भन्ने कुराहरु सोच्ने बेला आएको छ’ उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन,
‘त्यसैले पालिका र वडा अधिवेशन यो सामान्य हो, केही पनि होइन र हतारहतारमा गरिहालौं, जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन किनभने यो हाम्रो टेक्ने धरातल भएको हुनाले यहाँ समूहगत स्वार्थ छिर्न दिनुहुँदैन। मैले समूहगत स्वार्थ भनिराखेको छु। पार्टीभित्र यो पनि हावी भएको छ। समूहगत स्वार्थ छिर्न दिनु हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थ छिराउनु हुँदैन। आफ्नो पारिवारिक स्वार्थदेखि अनेकौं स्वार्थहरु हावी भइराखेको छ। यसो हुने हो भने पार्टीको वडा तह बलियो हुन सक्दैन। सुदृढ हुन सक्दैन।’